Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Warbixin: Waxyaabihii ugu Nuxurka badnaa khudbadii uu madaxweyne Xasan ka jeediyay shirkii midowga Afrika
Warbixin: Waxyaabihii ugu Nuxurka badnaa khudbadii uu madaxweyne Xasan ka jeediyay shirkii midowga Afrika
Jan 27, 2013 ENTERTAINMENT 0
Addis ababa (Harowo)Magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia oo maanta uu ka furmay shir madaxeedka midowga Africa ayaa madaxda ka hadashay waxa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin wax yaabaha u qabsoomay dowladiisa muddada ay jirtay.
Madaxweynaha oo ku hadlaayay afka Ingiriisiga ayaa khubadiisa waxa ay qaadatay 15-daqiiqo, waxana uu sheegay Soomaaliya ay ku soo laabatay qariirada adduunka.
“Mudanayaan iyo Marwooyin waxa aan xaqiijinaya Soomaaliya oo maanta miiska idinla fadhida ayna cidna culeys ku ahayn laakin waa arrin ay guul ku siiyeen ururkan qiimaha ku fadhiya, marna ma ahan wax riyo ee waa run in Soomaaliya ay meesheedii ku soo laabatay, aanu u damaashaadno oo aan dhadhamino mirihii waddadii dheereed oo ay ku baxday ilmada iyo naf hurnimada taasoo dhammaanteen aan ka wadaqaadanay siddii Soomaaliya ay ugu soo noqon lahayd halkii ay joogtay” ayuu yir madaxweynaha.
Muxuu ka yiri madaxweynaha dib-u-soo yageelida raajada Soomaaliya?
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay dib ugu soo noqotay bulshadda Africa.
“Soomaaliya waxa ay dib ugu soo laabatay bulshadda Africa, waxan idin hor taaganahay annigoo ah madaxweynaha la doortay ee dowlad sharci oo mataleysa dal madaxbanaan oo Soomaaliya ah, waa kuma ruuxa maleen karay sannad ka hore xilligii dheeraa uu na gaarsiinayo dib u dhis dimuquraadiyad cusub oo ku saleesan nabad iyo guu, baarlamaan guddoomiyihiisii la doortay . madaxweyne la soo doortay iyo xukuumad si wanaagsan u shaqeeneysa, marka Soomaaliya qayb kama ahan qariirad ay dad badani ay dooneyeen in ay iska ilaawaan”
Soomaaliya waa sida curdun u baahan in la ilaaliyo
Madaxweynaha ayaa u sheegay madaxda ka qaybgaleysa shir madaxeedka Africa in Soomaaliya ay tahay dal curdun ah oo u baahan xanaano iyo la garab qabto.
Ma uu ka hadlaayay caqabadaha dhinaca ammaanka ee horyaalla dowladiisa wuxuu yiri : “Waa jid u baahan taxadar, waxan la kulmi doonaa dhibab badan, laakin aan idin xasuusiyo guulihii aan gaarnay iyo waxa aan hiigsaneyno oo ah in dalka oo dhan laga dhigo mid ammaan ah” ayuu yiri markale.
Madaxweynaha ayaa u faahfaahiyay madaxda midowga Africa lixdii qoddob ee uu tiirka uga dhigay waxqabadka dowladiisa.
Wuxuu sheegay in joogista ciidamada AMISOM ay wax badan u tartay Soomaaliya oo qarka u saarneed in adduunka ay iska ilaabaan.
Wuxuu sheegay siddii joogitaanka AMISOM in ay guul u tahay siddii looga xoreen lahaa meelaha ay dalka kaga harsan yihiin Al-Shabaab.
Wuxuu kaloo madaxweynaha sheegay in loo baahan yahay in cunaqabateenta Soomaaliya saaran la qaado si loo qalabeeyo ciidamada dowladda oo la wareega illaalinta amniga dalka.
“Olalahaygu wadajirka ee looga soo horjeedo xagjirka iyo burcad-badeeda weli ma dhammaan, AMISOM waa in ay ahaataan mid xoog badan oo si wanaagsan u qalabeesan si ay howasha u sii wado isla markaana ay xoreyso meelaha weli Al-Shabaab gacantooda ugu jiro”
Madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay in haddii ciidamada dowlada ay la wareegaan ammaanka dalka loo baahan yahay taakulo gudaha iyo dibedda ah.
Wuxuu sheegay in ammaanka magaalada Muqdisho uu hadda yahay mid la isku haleen karo oo wax badan uu ka jiro isbadal.
Muxuu ka sheegay qoxootiga Soomaalida ee ku baahsan waddamada caalamka?
Madaxweynaha ayaa sheegay in dowaldiisa ay ka go’antahay siddii dib loo soo celin lahaa qoxootiga Soomaalida ee ku baahsan waddamada caalamka.
“Mudanayaal iyo Marwooyin aan dhowr eray ka iraahdo arrinta qoxootiga iyo soo noqoshadooda, waay naga go’antahay inta awoodayda aan sameeno in sida dibadda noogu maqan ay dalkooda dib ugu soo laaban lahaayn, waan dooneynaa in dadkeenu ay soo laabtaan,” ayuu yiri madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale tilmaamay in qaar badan ay hadda dib ugu soo laabteen dalka, waxaana uu dalalka dariska ka codsaday in yer ay dul qaataan.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in uu hindisaayo guddi seddax geesood ah, oo ka shaqeeya siddii dib loogu soo celin lahaa dalka Soomaalida ku dhaqan waddamada dariska.
Wuxuu kaloo sheegay in guddigaas ay ka koobanaan doonaan waddamada dariska ee qoxootiga ku yihiin Soomaalida, hey’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qoxootiga ee UNHCR iyo dowladda Fedaraalka Soomaaliya, si looga wadashaqeeyo xal fog soo noqoshada qoxootiga Soomaalida.
Baaq uu u diray beesha caalamka iyo midowga Africa
Madaxweynaha ayaa ugu baaqay beesha caalamka iyo madaxda midowga Africa in dowladiisa laga caawiyo siddii maalgalin caalami ah oo toos ah loo siiyo Soomaaliy.
Waxa uu ballan qaaday in dowladiisa ay si adag ula dagaalami doonto musuq-maasuga, isagoona waddamada aan safaarad ku lahayn Soomaaliya in ay dib uga furtaan xarumahoodii diplomaasi.
Waa markii ugu horreysay oo madaxweynaha Soomaaliya uu hadal ka jeediyo shir madaxeedka midowga Africa oo ah kii 20-aad.
SAWIRKA MAANTA ADuunyadan Cisihii Magan ahaa Saylac Ku murmaayo